Nagu saabsan | Wax soo saarka birta ee Cangzhou Kuntai Production Co., Ltd.
Qalabka birta ee birta
Walxaha Kubadda Bulxan
3-jidka Ball Valve
Qalabka Aan Birta Laheyn
Qalabka Birta Aan Xalka Ahayn / Quful Degdega ah
Xirmooyinka Fayadhawrka & Qalabka
Kataloog soo dejiso
Ku saabsan KUNTAI
Aasaaska & Goobta
Tan iyo markii la aasaasay 2010, Cangzhou Kuntai Metal Products Production Co., Ltd waxay leedahay sumcad dheer oo ku aaddan tayada iyo hal-abuurka soosaarka waardiyaha SS iyo waxyaabaha ku habboon. Waxay ku taalaa Cangzhou, Gobolka Hebei, oo aad ugu dhow Port Xingang Port, Tianjin, waxay na siisaa xaaladaha gaadiidka ee ku habboon.
Dhoofinta in ka badan 30 waddan, waxaan aasaasnay ​​sumcad weyn oo ka timid macaamiisha ku nool Yurub, Mareykanka, Bariga Dhexe, Koonfur Bari Aasiya iyo meelaha kale ee adduunka. Iyada oo loo marayo 10 sano oo waayo-aragnimo ah, waxaan ognahay sida loo xalliyo dhibaatooyinka mashruuc ee warshado kasta, maadaama aan heysanay koox injineerro ah oo u xilsaaran wax ka qabashada wixii caqabado ah ee la xiriira codsiyada Warshadaha.
KUNTAI waxay bixisaa alaabo kala duwan oo xakameyn qulqulka, oo ay ku jiraan Ball Valve, Gate Valve, Globe Valve, Check Valve, Y Strainer, Camlock / Degdega Degdega ah, iyo dhammaan noocyada wax ku xirxirista birta birta, oo ay ku jirto sheyga ugu weyn 304 / 304L / 316 / 316L, iwm Markaad raadineyso weelal tayo sare leh oo SS iyo qalabka ku rakibaya Shiinaha, fadlan aamin Kuntai wuxuu ku siin doonaa yaabab kugu filan.
Alaabada KUNTAI waxaa si balaadhan loogu dabaqay meelaha la xidhiidha saliida & gaaska, kiimikada & kiimikada, warshadaha cuntada, biyo bixinta, daaweynta biyaha, dhismaha & dhismaha, warshadaha nalka, korantada, dawooyinka, teknolojiyadda, qalabka sheybaarka, badda iyo kuwa kale.
KUNTAI wuxuu daboolayaa 17,000 mitir murabac, oo ay ka badan yihiin 200 oo shaqaale, wuxuu sameeyaa awood sanadle ah oo ah 800tons.
Waxaan leennahay xariiq wax soo saar oo dhameystiran, laga bilaabo naqshadeynta caaryada, tuurista, mashiinnada illaa daaweyn dusha sare. Marka laga hadlayo teknolojiyada, waxaan leenahay awood R&D xoogan oo aan ku buuxin karno shuruudaha qaaska ah ee macaamiisha ， sida godka qotodheer, daloolka adag, booska saxda ah, iwm.
Waxaan helnay shahaadada maareynta tayada ee IS0 9001, Shahaadada u hoggaansanaanta RoHS iyo shahaadada CE, oo caddeynaysa in alaabadu amaan yihiin oo aqoon leeyihiin.
KUNTAI waa shirkad shaqsiyadeed oo guulaheedii lagu gaadhay dadaalkii iyo dadaalkii shaqaalaheeda. Annagoo hubinayna inay tayadeedu sarreyso iyadoo si adag loo kormeerayo geeddi-socod kasta, waxaan bixinnaa halbeyn heer sare ah alaabada dhammaan macaamiisha hadda joogta iyo mustaqbalkaba. Meelkasta oo aad dunida ka joogtid, si kasta oo ay u adag tahay baahiyahaaga, waxaan dammaanad qaad u siineynaa jawaab deg deg ah dhammaan baahiyahaaga. Waxaan halkaan kuu joognaa adiga!
Fadlan la xiriir info@kuntaivalve.com si aad u hesho macluumaad dheeraad ah!
Su'aalaha ku saabsan badeecadaheena ama qiimeyahankeena, fadlan noogu soo dir emaylkaaga anagana waan la xiriiri doonnaa 24 saac gudahood.
FARIIN0086-13393391989 / 0086-13333275819
CINWAANKAWang Jia Pu Xiang Yu Zhuang Zi Cun, Cang County, Cangzhou City, Gobolka Hebei, Shiinaha
08:30 illaa 17:30